कञ्चनपुरबासीले अशुद्ध पानी कहिलेसम्म पीउने ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कञ्चनपुरबासीले अशुद्ध पानी कहिलेसम्म पीउने ?
कञ्चनपुर, १९ जेठ
खानेपानीको विकल्प नहुँदा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ नौखरीको राना परिवारले बस्ती नजिकै भएर बग्ने सनवोरा नदीको पानी पिउनका लागि उपयोग गर्दै आएकाछन ।
थोरै पैसाले ह्याण्ड पम्प गाड्न नसकिने भएपछि रानाको परिवारले नदीको पानी प्रयोग गर्दै आएको छ । रानाजस्तै यहाँका २० परिवारले एक दशकदेखि नदीको पानी पिउन बाध्य छन । “नदीको पानी अशुद्ध छ भनेर जान्दाजान्दै पनि बाध्यताले पिउनु परेको छ”, छोटीदेवी रानाले भने, “थोरै गहिराइमा ह्याण्ड पम्प गाड्दा पानी आउँदैन । गहिरो गाड्नका लागि आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन ।”
नदीको पानी पिउँदा पखाला, आउँ लगायत पानीजन्य रोग हुने गरेको छ । विभिन्न निकायमा सुरक्षित पानीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै आए पनि हालसम्म नभएको सुम्ली रानाले बताए । कमैयाबाट मुक्त भएपछि पुनःस्थापन गराइएका परिवार बस्तीमा बस्दै आएका छन । बस्तीका सबै परिवारसँग साँझ बिहानको खाना जुटाउनका लागि मजदूरी एक मात्रै सहाराका रुपमा रहेको छ ।
वर्षातका बेला धेरै परिवारले धमिलो पानीलाई भाँडामा जम्मा गरी थिग्रिएपछि पिउनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन । केहीले दुई किलोमिटर टाढाको बस्तीबाट बोकेर पानी ल्याई पिउँछन् । लुगा धुन र वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन यहाँका बासिन्दाले नदीको पानी नै चलाउँछन ।
नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रमेशबहादुर ऐर बस्तीमा पानीको व्यवस्था नभएको कुरा पहिलादेखि नै थाहा भएकाले अब यहाँका बासिन्दाले सास्ती खेप्नु नपर्ने बताउँछन् ।
वडाध्यक्ष ऐर युवा र जागरुक भएकाले बस्तीमा पानीको व्यवस्था हुनेमा ढुक्क भएको स्थानीयवासी विक्रम थापा बताउनुहुन्छ । चुनावकै बेला उहाँले पानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।